Habab kala duwan oo loo dego | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Habab kala duwan oo loo dego
Gudaha Iswiidhan waxaad u noolaan kartaa qaabab kala duwan. Waxaad kireysan ama iibsan kartaa guri yar. Waxaad kireysan ama iibsan kartaa guri weyn. Halkan waxaad ka helaysaa warbixin ku saabsan qaababka kala duwan ee loo noolaado.
Guryaha la kireysto
Degmada kastoo Iswiidhan ku taal waxeey leedahay shirkado guri ood guryo ka dalban kartid kana kireysan kartid. Ahirkadaha waxaa iska lahaan karo dadka caadiga ah ama degmada. Shirkad guri oo eey degmadu leedahay waxaa oo yaqaanaa shirkadaha guryaha ee sida guud looga faa'ideysto. Qofkii degan guri krio ah waxaa loo yaqaanaa guri kireyste. Markaas waxaad guriga ka kireysaneysaa qof ka ama shirkadda leh.
Akhri dheeraad ku saabsan kantaroolida guriga iyo waxa dhacaya haddii aad sababtay dhaawac soo gaaray guriga kuna qoran bogga intarnatka ee Hallå konsument. Macluumaadkan wuxuu ku qoranyahay Iswiidhish oo keliya.
Noocyada kala duwan ee heshiis
Waxaa jiraa qandaraasyo kala duwan markaad guri kireysaneysid. Hadaad qandaraas kowaad leedahay waxaad guriga deganaan kartaa inta aad dooneysid. Qandaraas labaad hadaad heysatid waxaa si gacan labaad ku meel gaarah uga kireysaneeysaa qofka heysto qandaraaska koowaad ee guriga.
Qandaraasyada suuqa madoow
Qandaraasyada suuqa madoow ee guryaha waa in lacag lagukala iibsadaa qandaraaska guriga. Ma u banaana guri kireeyaha iyo guri kireystaha ineey lacag ku qaataan gadashada qandaraaska kireynta. Qofkii raba inuu lacag kaaga gadaa waa dambiile waxaana lagu xukumi karaa xabsi.
Akhri dheeraad ku saabsan in laga baxo heshiis kuna qoran bogga intarnatka ee Hallå konsument. Macluumaadkan wuxuu ku qoranyahay Iswiidhish oo keliya.
ka kireynta ama ku wareejinta gurigan ee qof kale iyadoo aan oggolaansho laga haysan mulkiilaha guriga.
si xun u dayacay gurigan.
aan ka soo bixin wixi ku qornaa heshiiska kirada.
in ka badan hal toddobaad la habsaamay bixinta lacagta kirada.
Akhri dheeraad ku saabsan waxa dhacaya haddii aanad bixin karin kirada guriga oo aad khatar ugu jirto in lagaa saaro iyo waxa aad ka samayn karto dhanka bogga intarnatka ee Hey'adda dawladda ee qaabilsan qasab ku ururinta lacagaha deymaha ee la bixin waayo.
Xuquuqda degganaanshaha aan xadka lahayn ee guryaha la badh-iibsado waa guri eey qasab tahay inaad dhiibtid lacagta qiimihiisa tahay qeyb ka mid ah. Waxeey taasi ka dhigantahay inaad qeyb ka gadaneysid jaaliyada iska leh guriga. Waxaad markaas xubin ka noqoneeysaa jaaliyadaas waadna isticmaaleeysaa guriga.
Markaad degentahay guri badh-iibsi ah waxaad bil kasta lacag khidmad ah siineysaa jaaliyada. Hadaad lacag soo deynsatay markaad guriga gadaneysay waa inaad bangiga siisaa lacagta dulsaarka/ribada iyo qeybqeyb u bixinta lacagta guriga.
Degmada waxeey leedahay dallaalyaal iyo shirkado ku tusinaya guryaha iibka ah. Degmooyinka bogagooda internetka waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan shirkadaha guryaah ee ka dhisan degmada. Adiga kaligaa xataa waxaa guryaha iyo dhulalka beeca ah ka raadin kartaa internetka.
Akhri dheeraad ku saabsan in la iibsado guri kuna qoran bogga intarnatka ee Hallå konsument. Macluumaadkan wuxuu ku qoranyahay Iswiidhish oo keliya.
Iswiidhan guri waad ka gadan kartaa waadnka ka kireysan kartaa. Qiimaha guryaha la gato waxaa u dhaxeeyo fargi weyn waxeeyna ku xirantahay hadaad magaalo weyn ama magaalo yar ka gadaneysid. Degmada waxeey leedahay dallaalyaal iyo shirkado ku tusinaya guryaha iibka ah. Waxaad hadaad rabtid gadan kartaa dhul aad ka dhisna kartid gur kaada ah.
Kireynta gacan labaadka ah
In gacan labaad guri lagu kireeyo waa ka caadi Iswiishan. Waxeey taasi ka dhigantahay inaad guriga ka kireysatid qofka heysta qandaraaska koowaad. Waxaa kaloo gacan labaad kaga kireysan kartaa dadka guryaha eey iyagu leeyihiin heysta.
Hadaad rabtid inaad guri gacan labaad ah degtid waa muhiin inaad kontorooshid in shirkada guriga eey ansixisay.
Ku fikir inaad buuxisid kontoraad markaad markaad guri ku kireysaneeysid gacan labaad. Hadaan kontoraad ama qandaraas saxiixin waxaa guriga kaa bixin kara qofka heysta qandaraaska koowaad shuruudo la'aan. Qandaraaska xataa intaadan saxiixin waa muhiim inaad ogaatid xuquuqdaada iyo waajibaadkaada.
Akhri dheeraad ku saabsan xuquuqdaada markaad kireysato guri gacan labaad ah kuna qoran bogga intarnatka ee Hallå konsument. Macluumaadkan wuxuu ku qoranyahay Iswiidhish oo keliya.
Waad kireysan kartaa qol ku dhex yaal guri uu qof kale degan yahay. Waxaad la degantaahy qofka qandaraaska guriga haaysto. Taas ayaan la dhahaa la degeni. Shuruuc iyo waqti qandaraas joojin ayaa jira markaad la degene tahay xataa. Sidaad darteed xasuusnoow inaad qandaraas la qortid qofka aad qolka ka kireysaneysid.